New COVID-19 Omicron strain iri muUK, Belgium, Germany, Netherlands neCzech Republic izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » New COVID-19 Omicron strain iri muUK, Belgium, Germany, Netherlands neCzech Republic izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Belgium Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Czechia Breaking News • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
United Kingdom yakanyoresa nyaya dzayo mbiri dzekutanga dzeiyo Omicron musiyano weCCIDID-19 zuva mushure menyaya yekutanga yerudzi urwu, iyo masayendisiti anofungidzira kuti inogona kutapurirana zvakanyanya, yakanyorwa muEurope.
Nhasi, mutauriri webazi rezvehutano reCzech akazivisa kuti mumwe mukadzi aidzoka kubva kuzororo kuEgypt akaongororwa kuti ane hutachiwana kune izvo zvinotendwa kuti mutsauko weCCIDID-19. Akawedzera kuti muenzaniso uyu uri kudzidzwa zvakare, nechisimbiso chepamutemo chinotarisirwa neSvondo mangwanani.
Zviremera zveBelgian neGerman zviri kutsigira zviri pamutemo kuuya kwaOmicron mukondinendi yeEurope.
Zvichienderana neshumo kubva kuCzech Republic, Kai Klose, gurukota rezvemagariro nekubatana JerimaniDunhu reHesse, rakanyora kuti "Omicron musiyano watosvika kuGermany, uine mukana wakakura kwazvo." Klose akaburitsa kuti "kuchinja kwakawanda kwakafanana neOmicron kwakawanikwa mumunhu anobva kuSouth Africa" ​​neChishanu manheru. Munhu uyu akaiswa muhusungwa achimirira kutevedzana kwakazara kwehutachiona hwakawanikwa mumuenzaniso wavo.
Vakuru muNetherlands vanga vakatarisana nenhamba huru yevanofungidzirwa kuti nyaya dzeOmicron neChishanu, apo vanhu makumi matanhatu nevaviri vakasvika muAmsterdam vachibva kuSouth Africa vakaongororwa kuti vane COVID-61. Vafambi vakatorwa kubva panhandare yendege ndokuendeswa kune imwe hotera iri pedyo ndokuvharirwa ikoko. Bazi rezvehutano reDutch rakati masampuli ari kudzidzwa "nekukurumidza sezvinobvira [kuona] kana ari iwo musiyano mutsva wekunetseka, wava kunzi 'Omicron'."
Pakutanga zuva iro, hurumende yeDutch yakarambidza kufamba kwese nendege kubva kuSouth Africa uko rudzi rutsva rwakatanga kuonekwa. Vafambi vendege mbiri dzekupedzisira dzaiuya kubva ikoko vaifanira kupedza maawa vari munzira, vakamirira kuongororwa.
Belgium ine mutsauko unokahadzika wekuve nyika yekutanga muEurope kusimbisa zviri pamutemo nyaya yeOmicron. Gurukota rezvehutano munyika, VaFrank Vandenbroucke, vakazivisa nemusi weChina kuti murwere ane hutachiona munhu asina kubayiwa akaonekwa aine CCIDID-19 muna Mbudzi 22. Sekureva kwemukuru weBelgium virologist, Mark Van Ranst, muenzi wezororo uyu akambodzoka kubva kuEgypt.
Nezuro, iyo European Center Yezvirwere Kudzivirira uye Kudzora (ECDC) yambiro kuti pachine "kusava nechokwadi kusinga wirirane nekutapurirana, kushanda kwejekiseni, njodzi yekutapukirwa uye zvimwe zvinhu zveOmicron musiyano." Vakuru vehutano veEU vakaisa dambudziko iri senjodzi "yakakwira kusvika yakanyanya".
Zuva rimwe chetero, nyika dzose 27 dziri nhengo dzeEU dzakabvumirana kumbomira kufamba nendege kubva kunyika nomwe dzekumaodzanyemba kweAfrica. Iyo UK, US neCanada dzakatemerawo zvirambidzo zvakafanana.